Shuruudaha Iyo Xaaladaha-Qasabadaha Jikada, Tubooyinka Wax Kasta Ka Buuxi, Qasabada Musqusha | WOW
Bogga ugu weyn / Shuruudaha iyo shuruudaha
Websaydhkan waxaa maamula kooxda www.wowowfaucet.com. Inta websaydhka lagu jiro oo dhan, ereyada "annaga", "annaga" iyo "kuweena" waxaa loola jeedaa kooxda www.wowowfaucet.com. www.wowowfaucet.com waxay ku siisaa degelkan, oo ay ku jiraan dhammaan macluumaadka, aaladaha iyo adeegyada laga heli karo degelkan adiga, isticmaalaha, waxaa shardi ah inaad aqbasho dhammaan shuruudaha, xaaladaha, siyaasadaha iyo ogeysiisyada halkan lagu sheegay.
Markaad booqato bartayada iyo / ama wax aad naga iibsato, waxaad ku hawlan tahay "Adeeggeena" waxaadna oggolaatay inaad ku xirnaato shuruudaha iyo xaaladaha soo socda ("QODOBADA IYO XAALADAHA", "Shuruudaha"), oo ay ku jiraan kuwa shuruudaha dheeriga ah, xaaladaha iyo siyaasadaha tixraacayo halkan iyo / ama waxaa heli kara hyperlink. Shuruudahaan iyo shuruudahaani waxay khuseeyaan dhammaan isticmaaleyaasha bogga, oo ay ku jiraan isticmaaleyaasha aan xadidnayn ee daalacayaasha, iibiyeyaasha, macaamiisha, ganacsatada, iyo / ama wax ku biirinta waxyaabaha.
Fadlan si taxaddar leh u akhri shuruudahaan iyo shuruudaha ka hor intaadan marin ama isticmaalin degelkeenna. Adoo marinaya ama isticmaalaya qayb kasta oo ka mid ah goobta, waxaad ogolaatay in lagu xidho SHARCIYADA IYO XAALADAHA. Haddii aadan oggolaan dhammaan shuruudaha iyo shuruudaha heshiiskan, markaa waxaa suuragal ah inaadan marin websaydhka ama adeegsan wax adeegyo ah. Haddii Shuruudaan iyo XAALADAHA loo tixgeliyo inay yihiin dalab, aqbalaadda ayaa si cad ugu xaddidan xeerarkan iyo XAALADAHA.
Astaamo kasta ama qalab kasta oo cusub oo lagu daro bakhaarka hadda jira ayaa sidoo kale lagu raacayaa SHURUUDAHA IYO XAALADAHA. Waxaad dib u eegi kartaa nooca ugu hadda jira ee SHURUUDAHA IYO XAALADAHA wakhti kasta oo boggan ah. Waxaan xaq u leenahay inaan cusboonaysiinno, bedelno ama bedelno qayb kasta oo ka mid ah SHARCIYADA IYO XAALADAHA iyadoo la dhajinayo cusbooneysiinta iyo / ama isbeddelada degelkeenna. Adiga ayay mas'uul ka tahay inaad boggan ka hubiso xilliyada qaarkood isbeddelada. Sii wadida adeegsigaaga ama marin u helka websaydhka ka dib dhajinta wixii isbeddel ah waxay ka dhigan tahay aqbalaadda isbeddeladaas.
QAYBTA 1 - SHURUUDAHA KAYDKA ONLINE
Adoo ku raacaya SHARCIYADA IYO SHARCIYADA, uma isticmaali kartid badeecadeena wax sharci darro ah ama ujeeddo aan idmanayn sidoo kale adigu, Adeegga Adeeggu, kuma xadgudbi karo sharci kasta oo ku yaal xukunkaaga (oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn sharciyada xuquuqda daabacaadda).
Waa in aadan gudbin wax dirxi ama fayrusyada ama code mid ka mid ah nooca wax burburiya.
jebinta A ama xad gudub ku ah mid ka mid ah Terms waxay keeni doontaa in la joojiyo deg deg ah Adeegyada aad.
QAYBTA 2 - XAALADAHA GUUD
Waxaan xaq u leeyahay inuu diido adeeg qof sabab kasta wakhti kasta leenahay.
Waxaad fahamsantahay in aad content (ma jiraan macluumaad credit card), waxaa lagu wareejin karaa baraha kale oo ku lug leh (a) idaacadaha ka badan shabakadaha kala duwan; iyo (b) isbedel inay u hoggaansamaan iyo qabsado shuruudaha farsamo ee isku xidha shabakadaha ama qalab. macluumaad kaarka Credit waxaa had iyo Windows XP lagu guda jiro suuqa kala iibsiga ka badan shabakadaha.
Waxaad ogolaatay in aan la soo saari, nuqul, nuqul, iibiso, ka iibin ama loogana qayb kasta oo ka mid ah Service, isticmaalka adeega, ama helitaanka Service ama wax xiriir ah website-ka kaas oo adeeg la bixiyo, oo aan Express ogolaansho qoraal ah naga by .
cinwaanka ayaa loo isticmaalaa in heshiiskan lagu daro loogu talagalay oo kaliya oo aan xadidi doona ama haddii kale saamayn Terms kuwan.
QAYBTA 3 - SAXDA, BUUXINTA IYO WAQTIGA MACLUUMAADKA
Waxaan mas'uul ka ma aha haddii macluumaadka heli on this site ma aha mid sax ah, oo dhammeystiran ama hadda. Qoraalkani wuxuu on this site waxaa la siiyaa macluumaad guud oo keliya ma aha in laga dul halleeyeen ama loo isticmaalay saldhig kaliya ee samaynta go'aanada aan la tashan ilaha aasaasiga ah, badan oo sax ah, dheeraad ah oo buuxda ama in ka badan waqtigii macluumaadka. tiirsanaanta kasta oo ku saabsan waxyaabaha la on this site waa halis adiga kuu gaar ah.
Boggan waxaa ku jira macluumaad laga yaabaa in qaar ka mid taariikhi ah. Macluumaad Historical, qasab, ma aha hadda oo waxaa la siiyaa aad tixraaca oo keliya. Waxaan xaq u leeyahay inuu wax ka beddelo ka kooban this site waqti kasta hayo, laakiinse waxaannu yeelanaynaa waajib kuma aha inaad cusboonaysiiso macluumaad kasta on our site. Waxaad ku heshiiyaan in ay tahay masuuliyadaada in lala socdo isbedelada our site.
QAYBTA 4 - BADDELISTA ADEEGA IYO QIIMAHA
Qiimaha alaabooyinka our way isbadali ogeysiis la'aan.
Waxaan xaq u leenahay waqti kasta inuu wax ka beddelo ama joojin Service (ama wax kasta oo qayb ama content oo dhanba) ogeysiis la'aan waqti kasta.
Waxaan ku qasbanaan in laydiin diro ama in wax-dhinac seddaxaad ee ka beddelid kasta, isbedelka qiimaha, ganaax ama joojiyo of Service ma jiri doono.
QAYBTA 5 - SOO SAARKA AMA ADEEGYADA (haddii ay khuseyso)
alaabta ama adeegyada qaarkood waxaa laga yaabaa in la heli karo si gaar ah online marayo website-ka. alaabta ama adeegyada waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa in tiro xaddidan oo ku xiran yihiin in ay ku noqdaan ama sarrifka oo kaliya sida ay Policy noqo our.
Waxaan sameynay dadaal kasta si aan u muujinno sida ugu saxsan ee suurtogalka ah ee midabada iyo sawirada alaabtayada ee ka muuqda dukaanka. Ma balan qaadi karno in bandhiggaaga kumbuyuutarka uu muujinayo midab kasta oo sax ah.
Waxaan xaq u leenahay, laakiin aan ku waajib ah, in la xadido iibinta alaabta ama Services in aan qof, gobolka juqraafi ama awood. laga yaabaa in aan sidaa loo eegayo xaalad-xaalad. Waxaan xaq u leedahay inaad xaddido ka tiro ka mid ah wax soo saarka ama adeegyada aan bixino leenahay. All sharaxaada alaabta ama binta saarka way isbadali wakhti kasta ogeysiis la'aan, at digtoonaan kaliya oo inaga mid ah. Waxaan xaq u leeyahay inuu joojiyo wax soo saarka kasta oo waqti kasta leenahay. dalab kasta oo alaabta ama adeega lagu sameeyo on this site kan garaadka daran halka ay mamnuuc.
Annagu ma ballanqaadayso in tayada wax soo saarka kasta, adeegyada, macluumaadka, ama qalab kale oo soo iibsatay ama aad heshay kulmi doonaa filayo, ama in wax qalad ah Adeegga la saxo doonaa.
QAYBTA 6 - HUBINTA BIXINTA IYO MACLUUMAADKA XISAABTA
Waxaan xaq u leeyihiin inay diidaan wax kasta oo si aad meel nala leenahay. Waxaa laga yaabaa inaan, in aannu lasameeyay kaliya, xaddido ama burin tiro iibsaday qofkiiba, qoys kasta ama per si. xayiraad waxaa ka mid ah waxaa laga yaabaa in amar ag dhigay ama hoos account isku mid ah macaamiisha, kaarka isla credit, iyo / ama amarada isticmaala biilasha isku mid ah iyo / ama cinwaanka maraakiibta. Haddii ay dhacdo in aan isbeddel in la sameeyo ama kansasho amar, waxaa laga yaabaa inaan isku dayo in aad sheegto adigoo la xiriiraya e-mail iyo / ama cinwaanka biilasha phone number / siiyaa waqti amarka la sameeyey. Waxaan xaq u leedahay inaad xaddido ama mamnuucayo amray in, in our xukun kaliya, u muuqdaan in ay la ag dhigay ganacsatada, resellers ama distributors leenahay.
Waxaad ogolaatay in ay bixiyaan iibka hadda, dhamaystiran oo sax ah oo lagu xisaabiyo macluumaadka oo dhan iibsadaan dhigay at our dukaanka. Waxaad ku heshiiyaan in ay si degdeg ah u cusbooneysiin xisaabtaada iyo macluumaad kale, oo ay ku jiraan cinwaanka emailkaaga iyo tirada credit card iyo taariikhaha uu dhacayo, si aan buuxin kartaa xawaalad oo waxaad la xiriiri sidii loo baahan yahay.
Wixi faahfaahin dheeraad ah, fadlan dib u eeg Siyaasadeena Soo Celinta
QAYBTA 7 - QALABKA LAGU DOORTO
Waxaa laga yaabaa inaan ku siino helitaanka qalab dhinac saddexaad ka badan tan aynu mana socdo hana yeelanina gacanta mana aqbasho.
Waxaad qiraysaa iyo heshiiyaan in aan bixiyaan helitaanka qalabka sida "sida uu yahay" iyo "sida loo heli karo" oo aan wax damaanad, Wakiilada ama shuruudaha nooc kasta oo aan oggolaansho kasta. Waxaan ma ay heli doonaan mas'uuliyadda wax alla wixii ka timi ama la xiriira isticmaalka qalabka dhinac saddexaad optional.
Isticmaalka kasta oo aad by qalab optional bixiyo goobta gabi ahaanba waa aad halis gaar ah iyo digtoonaanta oo waa in aad loo hubiyo in aad tahay qof aqoon leh iyo ansixin ah ereyada uu on taas oo qalab waxaa bixiya bixiyaha dhinac saddexaad la xiriira (s).
Waxaan sidoo kale mustaqbalka, ku bixin karnaa adeegyo iyo / ama waxyaabo cusub shabakadda (oo ay ku jiraan, sii deynta aaladaha cusub iyo ilaha). Astaamahan cusub iyo / ama adeegyadan sidoo kale waa inay ku xirnaadaan Shuruudahaan iyo shuruudaha.
QAYBTA 8 - XIRIIRKA SADDEXAAD
content qaarkood, alaabta iyo adeegyada laga heli via Adeega ka mid noqon kara qalabka ka-dhinac saddexaad.
links-Xisbiga Saddexaad ee ku saabsan this site laga yaabaa inay websites dhinac saddexaad in aan xiriir la nala kugu toosin. Waxaan masuul kayahay baadhista ama qiimaynta content ama sax ma aha oo annagu ma ballanqaadayso oo aysan lahayn deyn ama mas'uuliyadda qalab kasta oo dhinac saddexaad ama websites, ama wixii kale ee qalabka, alaabta, ama adeegyada ka-dhinac saddexaad.
Kuma masuul ka ah waxyeello ama waxyeelo la xidhiidha iibsashada ama isticmaalka alaabta, adeegyada, ilaha, mawduuca, ama wax kasta oo kale oo la sameeyo oo la xidhiidha boggaga internetka ee saddexaad. Fadlan si taxadar leh u fiiri siyaasadaha iyo dhaqanka sadexaad ee dhinacyada oo aad hubiso inaad fahamto ka hor intaadan ku dhaqaaqin wax lacag ah. Cabashooyinka, sheegashooyinka, cabashooyinka, ama su'aalaha ku saabsan alaabada saddexaad waa in loo gudbiyaa dhinac saddexaad.
QAYBTA 9 - FAALLOOYINKA ISTICMAALKA, DIIWAAN-GELINTA IYO SOO-gudbinta KALE
Haddii, markii aan codsanno, aad dirto soo-gudbinno cayiman oo gaar ah (tusaale ahaan soo-gelinta tartannada) ama adigoon codsi naga helin waxaad soo dirtaa fikradaha hal-abuurka ah, soo-jeedimaha, soo-jeedimaha, qorshooyinka, ama agab kale, ha ahaato khadka tooska ah, emaylka, boostada, ama haddii kale (si wada jir ah, 'faallooyin'), waxaad ku raacsan tahay inaan laga yaabo, waqti kasta, iyada oo aan xadidneyn, wax ka bedelno, nuqulno, daabicinno, u qaybinno, tarjunno iyo haddii kale u adeegsan lahayn wax dhexdhexaad ah wixii faallooyin ah ee aad noo soo gudbiso. Waxaan nahay oo waajib nagu ah (1) inaan ku ilaalino wixii faallooyin ah si kalsooni leh; (2) in laga bixiyo magdhaw wixii faallooyin ah; ama (3) in laga jawaabo wixii faallooyin ah.
Waxaa laga yaabaa inaan, laakiin waajib nagu ahayn inaan, kormeerno, wax ka beddelno ama ka saarno waxyaabaha aan ku go'aansanno go'aankeenna keliya inay yihiin sharci-darro, aflagaado, hanjabaad, aflagaado, sumcad-dilid, qaawan, fisqi ama haddii kale diidmo ama ku xad-gudubto hanti aqooneed ee xisbi ama shuruudahan iyo shuruudahaan. .
Waxaad ogolaatay in comments aad kuma xad gudbi doonto xaq ka mid ah wax-dhinac saddexaad, oo ay ku jiraan copyright, summad, gaarka ah, dabeecad ama xaq qof ahaaneed ama lahaansho kale. Waxaad sii raacsan tahay in comments ma jiri doona dhimaayo ama ashyaa haddii kale sharci darro, xadgudub ama fisqi, ama ku jira virus computer kasta ama furin kale oo sinaba saamayn ku yeelan kara hawlgalka of Service ama website kasta oo la xiriira. Waxaad ma isticmaali kartaa cinwaan e-mail been ah, iska dhig sidii mid qof kale naftaada ka badan, ama haddii kale na ama dhinac saddexaad dhumiyo sida ay u asalka ah ee wax comments. Waxaad keliya ayaa masuul ka ah wax kasta oo aad samayn comments oo ay sax yihiin. Waxaan qaadnay mas'uuliyad lahayn iyo u qaadan lahayn deyn wixii comments posted adiga ama wax-dhinac saddexaad by.
QAYBTA 10 - MACLUUMAADKA QOFKA
Soo gudbinta macluumaadka shakhsi ahaaneed ee dukaanka waxaa maamula Siyaasadeena Qarsoodiga ah.
QAYBTA 11 - QALADKA, WAXBARASHADA IYO QIIMAYNTA
Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in macluumaadka on our site ama Service ay ku jiraan khaladaad typographical, qalad ama laga tegay laga yaabaa in la xidhiidhaan sharaxaada alaabta, binta, dallacaadaha, dalab, eedeeyay maraakiibta soo saarka, jeer transit iyo helitaanka. Waxaan xaq u leeyahay in la saxo wixii qalad ah, qalad ah ama laga tegay, iyo in la beddelo ama u cusboonaysiiso macluumaad ama kansasho amar haddii macluumaad kasta ee Service ama on website kasta oo la xiriira waa sax ahayn waqti kasta ogeysiis la'aan ka hor (oo ay ku jiraan ka dib markii aad soo gudbisay amarkaaga) leenahay .
Waxaan qaataan waajib kuma aha in ay u cusbooneysiin, baddalo ama caddeeyo macluumaadka Service ama on website kasta oo la xiriira, oo ay ku jiraan xad la'aan, binta macluumaad, marka laga reebo sida sharcigu u baahan yahay. No cayimay update ama u raaxayn taariikhda codsatay in Service ama on website kasta oo la xidhiidha, in la qaadaa si ay u muujiyaan in dhammaan macluumaadka ku Service ama on website kasta oo la xiriira wax laga badalay ama updated.
QAYBTA 12 - ISTICMAALKA XAARAANNIMADA
Marka lagu daro mamnuucyada kale sida ku cad SHARCIYADA IYO XAALADAHA, waxaa lagaa mamnuucay inaad u isticmaasho goobta ama waxyaabaha ku jira: (a) ujeedo kasta oo sharci daro ah; (b) si looga codsado dadka kale inay sameeyaan ama ka qaybgalaan ficillo kasta oo sharci darro ah; (c) in lagu xad gudbo qawaaniinta, xeerarka, sharciyada, ama qawaaniinta caalamiga ama kuwa Uk; (d) ku xad gudubka ama ku xadgudubka xuquuqdeena aqooneed ee aqooneed ama xuquuqda lahaanshaha aqooneed ee dadka kale; (e) in la dhibaateeyo, la aflagaadeeyo, la aflagaadeeyo, waxyeello loo geysto, magac dil, cay, cay, cabsi gelin, ama takoorid ku saleysan jinsiga, nooca galmada, diinta, qowmiyadda, jinsiyadda, da'da, dhalashada waddanka, ama naafonimada; (f) inay soo gudbiyaan macluumaad been ah ama marin habaabin ah; (g) in la soo raro ama la soo gudbiyo fayrasyada ama nooc kasta oo koodh xun ah oo loo isticmaali doono ama loo isticmaali karo si kasta oo saameyn ku yeelan doonta howlaha ama howlaha Adeegga ama degel kasta oo la xiriira, degellada kale, ama internetka; (h) ururinta ama raad-raaca macluumaadka shaqsiyeed ee kuwa kale; (i) spam, phish, farm, pretext, caaro, gurguurto, ama xoqid; (j) ujeedo kasta oo fisqi ah ama anshax xumo ah; ama (k) inay farageliso ama hareer marto astaamaha amniga ee Adeegga ama degel kasta oo la xiriira, degellada kale, ama internetka. Waxaan xaq u leenahay inaan joojino isticmaalkaaga Adeegga ama degel kasta oo laxiriira ku xadgudubka adeegsiga mamnuuca ah.
QAYBTA 13 - DIIDAYN DARYEELKA; Xaddidaadda mas'uuliyadda
Annagu ma damaanad, wakiil ama amar in isticmaalka adeegga noqon doonaa go ', waqtiga, ammaan ama baadi-free.
Annagu ma ballanqaadayso in natiijada in laga heli karaa isticmaalka adeega uu noqon doono mid sax ah ama la isku halayn karo.
Waxaad ogolaatay in waqti ka waqti laga yaabaa in aan ka saari adeegga muddo indefinite waqti ama joojin adeeg mar kasta, iyada oo aan ogeysiin in aad.
Waxaad si cad u raacsan tahay isticmaalkaaga, ama awood la'aanta isticmaalka, adeeggu wuxuu ku jiraa khatartaada oo keliya. Adeegga iyo dhammaan alaabooyinka iyo adeegyada laguu siiyay adiga oo adeegsanaya adeega waa (marka laga reebo sida aan si cad u sheegnay) annaga oo ah 'sida' 'iyo' sida loo heli karo 'ee isticmaalkaaga, adigoon wax matalaad ah, damaano ama shuruudo nooc kasta ah, taas oo ay ku jirto dhammaan shuruudaha la sheeganayo ama shuruudaha ganacsiga, tayada ganacsiga, ujirnimada ujeedo gaar ah, adkeysiga, cinwaanka, iyo xadgudub la'aanta.
Marnaba ma ahan anaga, Agaasimeyaasheena, shaqaalaha, shirkadaha, wakiilada, qandaraasleyda, shaqo joojiyaha, alaab-qeybiyeyaasha, bixiyeyaasha adeegga ama shati-bixiyeyaasha ayaa masuul ka ah waxyeellada, lumitaanka, sheegashada, ama wax toos ah, aan toos ahayn, dhacdo, ciqaab, khaas ah, ama Dhibaatada ka timaadda nooc kasta, oo ay ku jirto, aan xadidnayn faa'iido, dakhliga lumay, keydka lumay, lumista macluumaadka, kharashka beddelka, ama waxyeelo la mid ah, haddii ku saleysan qandaraas, caday (oo ay ku jirto dayacaad), masuuliyad adag ama haddii kale, adeegsiga mid kasta oo ka mid ah adeegga ama alaab kasta oo lagu iibsado adeegga, ama wixii dalab kale oo la xidhiidha si kasta oo aad u isticmaasho adeegga ama wax soo saarka, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidneyn, qalad kasta ama maqnaansho kasta, ama mid khasaaro ama waxyeelo nooc kasta oo ka timaadda isticmaalka adeegga ama wax kasta oo ah (ama sheyga) oo la soo dhajiyey, lagu gudbiyey, ama haddii kale laga helayo adeegga, xitaa haddii lagugula taliyay suurtagalnimada. Sababtoo ah dawlad-goboleedyo qaarkood ama aan awood u lahayn in ay u oggolaadaan ka-saarista ama xaddidaadda mas'uuliyadda waxyeelada soo gaartay ama waxyeellada ah, ee dawladahaas ama degaannadaas, mas'uliyadeena waa in ay xadidan tahay inta ugu badan ee sharcigu ogol yahay.
QAYBTA 14 - MADAXBANAAN
Waxaad ogolaatay inaad xaqdhawrto, difaacdo oo aad haysato anaga iyo waalidkeena aan waxyeello lahayn, hoosaadyada, shuraakada, wada-hawlgalayaasha, saraakiisha, agaasimayaasha, wakiilada, qandaraaslayaasha, shati bixiyaasha, bixiyeyaasha adeegga, qandaraasle-hoosaadyada, alaab-qeybiyeyaasha, layliyo iyo shaqaale, aan waxyeello u lahayn dalab ama dalab kasta, oo ay ku jiraan macquul khidmadaha qareenka, ee ay sameyso cid kasta oo sadexaad sababtuna tahay ama ka timaadda jabinta shuruudahaan iyo XAALADAHA ama dukumiintiyada ay ku darayaan tixraac ahaan, ama ku xadgudubka sharci kasta ama xuquuqda dhinac saddexaad.
QAYBTA 15 - KHILAAFKA
Haddii ay dhacdo in bixin kasta oo ka mid ah XEERARKA IYO XAALADAHA la go'aamiyay inay tahay mid aan sharci ahayn, wax aan jirin ama aan la fulin karin, qodobkaasi si kastaba ha ahaatee waxaa lagu dhaqangelinayaa inta ugu badan ee sharcigu oggol yahay, qaybta aan la fulin karinna waxaa loo qaadan doonaa inay ka go'an tahay axdigaan iyo XAALADAHA, go'aanka noocan ahi ma saamayn doono ansaxnimada iyo dhaqangelinta qodobbada kale ee hadhay.
QAYBTA 16 - MUDDADA
The waajibaadka iyo masuuliyadda dhinacyada gashay ka hor taariikhda joojinta noolaan doonaan joojinta heshiiskan ujeedooyin dhan.
Shuruudahaan iyo shuruudaha ayaa wax ku ool ah illaa iyo inta laga joojinayo adiga ama annaga. Waad joojin kartaa SHARCIYADAN IYO SHURUUDAHA wakhti kasta adoo nagu wargelinaya inaadan mar dambe rabin inaad isticmaasho Adeegyadeena, ama markaad joojiso adeegsiga bartayada.
Haddii xukunkeena keli ah aad ku guuldareysato, ama aan ka shakinno inaad ku guuldareysatay, inaad u hogaansanaato erey kasta ama bixinta shuruudahaan, waxaan sidoo kale laga yaabaa inaan joojino heshiiskan waqti kasta ogeysiis la'aan adigana waxaa lagaa rabaa inaad masuul ka ahaato dhammaan inta la rabo ilaa iyo ay ku jirto taariikhda joojinta; iyo / ama sidaa awgeed waxay kuu diidi kartaa inaad hesho Adeegyadayada (ama qayb ka mid ah).
QAYBTA 17 - HESHIISKA OO DHAN
Ku guuldareysiga inaga ah inaan jimicsi sameyno ama aan xoojino wax kasta oo xaq ah ama bixin ah oo ka mid ah SHARCIYADA IYO SHARCIYADA ma noqoneyso ka tanaasulka xuquuqdaas ama bixintaas.
Shuruudahaan iyo shuruudahaan iyo wixii siyaasado ama qawaaniin hawleed ah ee aan ku dhajinno boggan ama ixtiraamka Adeeggu wuxuu ka kooban yahay dhammaan heshiiska iyo isfahamka naga dhexeeya annaga iyo annaga oo xukuma adeegsigaaga Adeegga, iyadoo laga sarreysanayo heshiisyo hore ama kuwa aan loo baahnayn, isgaarsiin iyo soo-jeedin. , hadday tahay hadal ama qoraal, innaga iyo adiga (oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, nooc kasta oo hore oo ka mid ah SHARCIYADA IYO XAALADDA)
Madmadow kasta oo ku jira tarjumaadda SHARCIYADA IYO SHARCIYADA looma sharixi karo kooxda qoritaanka.
QAYBTA 18 - SHARCIGA MAAMULKA
Shuruudahaan iyo XAALADAHA iyo heshiis kasta oo gooni ah oo aan ku siino adiga Adeegyada waxaa lagu xukumi doonaa loona dejin doonaa si waafaqsan sharciyada Boqortooyada Midowday.
QAYBTA 19 - ISBEDDELKA SHARCIYADA IYO SHURUUDAHA
Waxaad dib u eegi kartaa nooca ugu hadda jira ee SHURUUDAHA IYO XAALADAHA wakhti kasta boggan.
Waxaan xaq u leenahay, go'aankeena kaliya, inaan cusbooneysiinno, bedelno ama badalno qeyb kasta oo ka mid ah SHARCIYADA IYO XAALADAHA iyadoo la cusbooneysiinayo cusbooneysiinta iyo isbeddelada degelkeena. Adiga ayay mas'uul ka tahay inaad ka hubiso degelkeenna xilliyada qaarkood isbeddelada. Sii wadidaada adeegsiga ama marin u helka degelkeena ama Adeegga ka dib dhajinta wixii isbedel ah ee ku saabsan SHARCIYADA IYO XAALADAHA waxay ka dhigan tahay aqbalida isbedeladaas.